Fomba Hanampiana Ireo Tra-boina Tamin’ny Rivodoza Tao Filipina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Novambra 2013 0:03 GMT
Sisam-patin'ny rivodoza tao Tacloban milahatra miandry fanampiana. Sary an'ny governemanta.
Tamin'ny fotoana nanoratana, herinandro iray aty aorian'ny namelezan'ilay rivodoza mahery vaika Haiyan (Yolanda) ny faritra afovoan'i Filipina, olona 2.357 no maty ary 338.000 no mialokaloka aminà toby fialofana. Mbola heverina hiakatra ny isan'ny fahavoazana arakaraky ny ahatongavan'ireo mpamonjy voina sy mahita maso ny zava-mitranga any amin'ireo toerana lavitra any Samar amin'ny faritanin'i Leyte.
An'aliny no maty taorian'ny fandalovan'ilay rivodoza tao Tacloban, renivohitr'i Leyte. Tanàna maro no rava ka niteraka tsy manan-kialofana marobe. Nitaraina ireo sisam-paty fa hoe tsy misy fanampian'ny governemanta mba voarain-dry zareo. Misy ny tatitra milaza fa matin'ny hanoanana ny sasany amin'ireo mpialokaloka. Lavin'ny governemanta anefa ny hoe taraiky be ry zareo amin'ny fitondràna fanampiana ho an'ireo tra-boinan'ny rivodoza.
Ilaina maika ireo fanampiana hamonjena aina marobe ary hanarenana ireo tanàna voadona. Soa ihany, miraradraraka ny fanampiana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Nanangana lisitra ahitàna ireo masoivoho afaka mandray ny fanampiana avy amin'ny iraisampirenena ny governemanta. Maro ihany koa ireo fikambanana mpanao asa soa ary ny sekoly no nanaiky handray ireo karazam-panomezana samihafa. Azo alefa na dia amin'ny alàlan'ny iTunes sy finday ihany koa aza ny fanampiana. Tsy haka sàrany ny Western Union amin'ny fandefasana vola ho any Filipina hatramin'ny faran'ny volana.
Ity mpanoratra ity dia manome sosokevitra mikasika ny asa famonjena avy amin'ny Citizens’ Disaster Response Center (Ivontoeran'ny Olon-pirenena Hiatrehana Loza Voajanahary), ny Vovonam-pirenena hatrehana ny olana ao Filipina (ho an'ireo monina any Etazonia), ary ny Sagip Migrante.
Sarintany avy amin'ny governemanta ahitàna ny fanampiana natao noho ilay loza voajanahary. Ny faritra mena dia ireo faritany tena voa mafy tao Visayas.
Ny tranonkala ofisialin'ny governemanta dia manome hatrany fanavaozam-baovao momba ny fiantraikan'i Haiyan sy ny asa famonjena. Ireo izay mikaroka havana na namana tsy hita dia afaka mahita fanampiana amin'ny alàlan'ny Google Person Finder (Fikarohana olona ao amin'ny Google) ary ny sehatra fikarohana an'ny Vokovoko Mena ao Filipina. Mandritra izany, nampakatra lisitra iray ahitàna ireo olona namoy ny ainy tany amin'ireo faritany ravan'ny rivodoza ny governemanta.
Ao amin'ny Twitter, #yolandaph no tena tenifototra ampiasaina hanaraha-maso ny zava-mitranga. #reliefph ho an'ny asa fanampiana. #rescueph ho an'ny fikarohana sy famonjena. Ary #tracingph ho an'ny fikarohana ireo olona tsy hita.
Maneho hevitra mikasika ny anjara toeran'ny media sosialy amin'ny fandrindràna ny hetsika nandritra sy taorian'ilay rivodoza i Robert Plaza :
Izao no tena fotoana ho an'ny media sosialy hanehoana ny fa tena ilaina izy, saingy indrisy, anatin'izao faharavàna izao. Hatreto, tsy nandiso fanantenana ny media sosialy — afa-tsy ireo any amin'ny faritra misy fahatapahana herinaratra sy fifandraisana, mazava ho azy, ary azon'ny rehetra an-tsaina izany. Kanefa tantara hafa mihitsy ny any ivelan'ireo faritra tra-doza, na izany aza: efa lasa fitaovana tena manampy olona marobe hiatrika ny loza ny media sosialy.
SARIPIKA avy amin'i @jeffcanoy: Faharavàna ao Leyte hita avy eny ambony fiaramanidina #YolandaPHpic.twitter.com/r0QMpdeSBP
— ABS-CBN News Channel (@ANCALERTS) 14 Novambra 2013
Fiangonana iray rava ao amin'ny faritanin'i Aklan. Sary an'ny pejy Facebook Aklanon AKO (Tiako i Aklan).
Asa fitsinjaràna sy famonosana ireo fanampiana tao Tacloban. Sary an'ny governemanta.
ZZZZZZZZ Tonga ao amin'ny nosy Pan de Azucar, any Conception, Iloili tamin'ny alàlan'ny angidimby ireo fanomezana. Tsy mijanona ho an'ny faritra Atsinanan'i Visayas ihany ny ezaka ataonay.
— Team AFP (@TeamAFP) 12 Novambra 2013
ZZZZZZZZZZZ Avana eny amin'ny lanitr'i Tacloban, nanamarika ny herinandro voalohany tamin'ilay loza voajanahary. Mbola misy ny fanantenana
— Raffy Tima (@raffytima) 14 Novambra 2013
Ataon'ny Manila Times lisitra ny tokony ho laharam-pahamehan'ny ezaka famonjena ataon'ny governemanta :
Betsaka tsy mbola voaisa ireo maty tsy voalevina, ary ireny vatana miha-lò ireny dia faran'izay mpampita aretina. Fa ny tena olana, mampananosarotra ny asa fanampiana sy fanarenana ny fofona avoakan'ireny faty ireny.
Avy eo, misy ireo olona marary na maratra mafy. Raha tsy mahazo tohana ara-pitsaboana faran'izay haingana izy ireny, dia na ho faty, ary ho lasa hameno ny antontanisa izay efa sarotra ny misaina/manaiky azy.
Misy koa ireo olona an'aliny tsy manana na inona na inona, tena ara-bakiteny ny hoe tsy manana na inona na inona. Tsy trano (satria ravan'ny rivotra izy ireny), tsy sakafo (satria very nandritra ny fandalovan'ny rivodoza ny tahirin-tsakafony), ary tsy misy afa-tsy izay eny an-kodiny sisa (satria ny fitafiany rehetra simban'i Yolanda avokoa).
Tsapan'i Boo Chanco ny mampitombina ny kiana atao amin'ny fihisatry ny asa famonjena avy amin'ny governemanta:
Mampiasa saina ahy ankehitriny ny maha-mitombina ireo antso hanatsaharana ny fanakianana ny filedaledan'ny asa famonjena ataon'ny governemanta. Tahaka ny ilaina ihany ny kiana, indrindra ireo avy amin'ny fampahalalam-baovao avy any ivelany, mba hihetsehan'ireo mpitàna birao aty amintsika hahatsapa ny dikan'ny atao hoe hamehana. Mila miray hina mba ho vahoaka iray sy mifanome tànana isika , hiatrehana ity loza mahatsiravina ity, saingy tsy midika izany fa hoe tsy mila manindry ny zavatra azo hatao sy ny tokony hanaovana tsara ny zavatra rehetra isika.
Violeta Lopez Gonzaga (tamin'ny alàlan'ny pejy Facook an'i Mila Aguilar), mpiasa sosialy avy amin'ny governemanta, dia mangataka ny vahoaka mba tsy hitanila amin'ny fitsaràna ireo asa fanampiana ataon'ny governemanta :
Votsa izahay, ekena. Saingy aoka mba hahatsapa fa olona 5 monja ka isan'izany ny tale sy ny tale mpanampy izay mipetraka ao amin'ny biraonay ao Tacloban, no mitatitra ny fandehan'ny asa. Tsy fantatray ny amin'ireo mpiasa hafa na mbola velona, naratra sa efa maty. Tsy manana fotoana hikarohana azy ireny akory aza izahay.
Mbola tapaka ny làlana noho ireo poti-javatra eny, ka araka izany dia tsy misy ny fitaterana mivantana. Mba olombelona ihany koa ireo mpiasanay eny an-kianja. Ireny olombelona ireny, izay mba isan'ny tra-boina ihany koa, no governemanta iantefan'ny tifitrareo ankehitriny milaza anay ho votsa. Tsy faingana araka ny tokony ho izy sy araka ny fenitra napetrakay izahay saingy, miangavy anareo mba hahatsapa fa mihoatra lavitra noho izay noetritretretina i Yolanda, mihoatra lavitra noho izay niomanantsika.